OTU ESI EME NHAZI NHAZI NKE DISKI DISKI, IHE NGOSI FLASH - DISK - 2019
N'ọnọdụ ụfọdụ, ị ga-eme nhazi nhazi nke diski ike (dịka ọmụmaatụ, iji "gwọọ" ọjọọ HDD ndị ọzọ, ma ọ bụ iji wepuchaa ozi niile site na ụgbọala, dịka ọmụmaatụ, ị na-ere kọmputa ahụ ma chọghị ka onye ọ bụla gwuo n'ime data gị).
Mgbe ụfọdụ, usoro dị otú ahụ na-emepụta "ọrụ ebube", na-enye aka mee ka disk ahụ dịghachi ndụ (ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, eriri flash USB na ngwaọrụ ndị ọzọ). N'isiokwu a, m chọrọ ịtụle ụfọdụ nsogbu ndị onye ọrụ ọ bụla na-eche banyere ya. Ya mere ...
1) Uzo bara uru maka odi elu HDD formatting
N'agbanyeghi na enwere otutu otutu ulo oru ndi a, gunyere ndi oru azu azu site na nkuku ihe nkesa, ana m akwado iji otu n'ime ihe kacha mma - Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ HDD LLF.
Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ HDD LLF
Mpido usoro mmemme
Usoro ihe a na-eme ngwa ngwa ma na-eduzi obere HDD na draịvụ Flash. Ihe na-adọrọ mmasị, ọ nwere ike iji ya ọbụna site na ndị ọrụ ọ bụla. A kwụrụ ụgwọ ahụ, ma enwerekwa mbipute n'efu na oke ọrụ: ọsọ ọsọ kachasị elu bụ 50 MB / s.
Rịba ama Dịka ọmụmaatụ, maka otu diski ike "nnwale" nke 500 GB, ọ na-ewe ihe dị ka awa 2 iji mee nhazi usoro dị ala (nke a dị na mbipute n'efu nke usoro ihe omume ahụ). Ọzọkwa, ọsọ ahụ dara mgbe ụfọdụ karịa 50 MB / s.
ọrụ na-akwado ọrụ SATA, IDE, SCSI, USB, Firewire;
ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nkwado: Hitachi, Seagate, Maxtor, Samsung, Western Digital, wdg.
na-akwado usoro mgbasa ozi Flash-formatting mgbe ị na-eji kaadị agụ.
Mgbe ịkọpụta data na ụgbọala ga-ebibi kpamkpam! Akụrụngwa na-akwado USB na Firewire draịva (ya bụ, ị nwere ike ịhazi na weghachite ọbụna kọmpụta flash USB).
Na nhazi usoro dị ala, a ga-ehichapụ MBR na tebụl nkebi (enweghị usoro ga-enyere gị aka weghachite data, kpachara anya!).
2) Mgbe ị ga-eme nhazi usoro dị ala, nke na enyere aka
Ọtụtụ mgbe, a na-eme ụdị nhazi maka ihe ndị a:
Ihe kachasị kpatara ya bụ ikpochapụ ma kpochapụ diski ahụ site na mgbochi ọjọọ (ọjọọ na enweghị ike ịgụta ya), nke ga-eme ka ọ ghara ịdị irè arụmọrụ nke draịvụ ike ahụ. Ọdịdị dị ala na-enye gị ohere ịnye "ntụziaka" na diski ike ka o wee nwee ike ịhapụ ndị ọrụ ọjọọ, dochie ọrụ ha na ndị ndabere. Nke a na-eme ka arụmọrụ nke diski (SATA, IDE) dịkwuo mma ma nwekwuo ndụ nke ụdị ngwaọrụ a.
Mgbe ha chọrọ iwepụ nje virus, mmemme ọjọọ nke na-enweghị ike wepụ site na ụzọ ndị ọzọ (dịka dị mwute, a chọtara);
Mgbe ha na-ere kọmputa (laptọọpụ) ma chọghị ka onye nwe ọhụrụ gụọ akwụkwọ akụkọ ha;
N'ọnọdụ ụfọdụ, a ghaghị ime nke a mgbe ị "gbanwere" site na Linux usoro Windows;
Mgbe a na-ahụ ngwa ngwa mbanye (dịka ọmụmaatụ) na usoro ọ bụla ọzọ, ọ gaghị ekwe omume ide faịlụ na ya (yana n'ozuzu ya, jiri ya na Windows);
Mgbe ejiri njikọ ọhụrụ, wdg.
3) Otu ihe atụ nke nhazi usoro dị ala nke ngwapu USB na Windows
Ihe ole na ole dị mkpa:
A na-agbakọ disk diski n'otu ụzọ ahụ dị ka ọkụ mbanye na-egosipụta na ihe atụ.
Site n'ụzọ, ọsọ ọsọ bụ ihe kachasị eme, nke a mere na China. Ebumnuche maka nhazi: kwụsịrị ịmara ma gosipụta na kọmputa m. Ka o sina dị, oghere Ngwá Ọrụ HDD LLF na-ahụ ya ma kpebie ị gbalịa ịzọpụta ya.
Ị nwere ike ime nhazi usoro dị ala n'okpuru Windows na Dos. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-eme ihe na-emehie otu ihe, ihe kachasị mkpa bụ mfe: ị pụghị ịkọ disk nke ị buuru! Ee ọ bụrụ na ị nwere diski diski na Windows arụnyere na ya (dị ka ọtụtụ), mgbe ahụ ịmalite ịhazi ụdị disk a, ịkwesiri ịkwalite site na onye ọzọ, dịka ọmụmaatụ, site na Live-CD (ma ọ bụ jikọọ diski na laptọọpụ ọzọ maọbụ kọmpụta ma mee ya formatting).
Ma ugbu a, anyị na-aga n'ihu usoro ahụ n'onwe ya. M ga eche na HDD LLF Azụlite Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ abanyelarịrị ma wụnye ya.
1. Mgbe ị na-agba ọsọ ahụ, ị ​​ga-ahụ windo na ekele na ego maka usoro ihe omume ahụ. Ụdị nnwere onwe dị iche na ọsọ, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị diski dị oke ma enweghi ọtụtụ n'ime ha, mgbe ahụ nhọrọ nnwere onwe zuru oke iji rụọ ọrụ - pịa bọtịnụ "Gaa n'ihu".
Akpa mwepụta nke HDD LLF Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ N'uba
2. Ọzọkwa, ị ga-ahụ na ndepụta ndị niile draịva jikọọ ma chọta site na njirimara. Biko rịba ama na agakwaghị abụ "C: " disks, wdg. N'ebe a, ị ga-elekwasị anya na ngwa ngwaọrụ na oke nke ụgbọala ahụ.
Maka ịhazi usoro, họrọ ngwaọrụ achọrọ na listi wee pịa bọtịnụ "Nọgidenụ" (dịka na nseta ihuenyo n'okpuru ebe a).
3. Na-esote, ị ga-ahụ windo na ozi gbasara draịva. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ihe dị na S.M.A.R.T., chọpụta nkọwa ndị ọzọ banyere ngwaọrụ (nkọwa Ngwaọrụ), ma mee ka ịkpụpụta - taabụ LOW-LEVE FORMAT. Nke ahụ bụ ihe anyị na-ahọrọ.
Ka ị gaa n'ihu na formatting, pịa Usoro Nke a Ngwaọrụ Ngwaọrụ.
Rịba ama Ọ bụrụ na ị na-ele igbe dị n'akụkụ Igwe ngwa ngwa ihichapụ ihe, kama nhazi ọkwa dị ala, a ga-emepụta usoro nhazi ahụ.
Ọdịdị dị ala (usoro ngwaọrụ).
4. Mgbe ahụ, ịdọ aka ná ntị ịdọ aka ná ntị na-egosi na a ga-ehichapụ data niile, lelee ụgbọala ahụ ọzọ, ikekwe data dị mkpa dị na ya. Ọ bụrụ na ị mepụtara akwụkwọ ndabere niile nke akwụkwọ ya - ị nwere ike n'enweghị nsogbu ...
5. Usoro nhazi ga-ebido. N'oge a, ịnweghị ike wepu USB flash mbanye (ma ọ bụ kpatụ diski), dee ya (ma ọ bụ kama ịnwa ide), na n'ozuzu ịghara ịme ihe ọ bụla na-achọsi ike na kọmputa ahụ, ọ ka mma ịhapụ ya ruo mgbe arụchara ọrụ ahụ. Mgbe e mechara ya, osisi mmanya ahụ ga-eru na njedebe ma gbanwee edo edo. Mgbe nke ahụ gasịrị ị nwere ike mechie ọrụ ahụ.
Site n'ụzọ, oge ọrụ ahụ dabere na nsụgharị nke ọrụ gị (ụgwọ / n'efu), nakwa dị ka steeti nke ụgbọala n'onwe ya. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ njehie na diski ahụ, ndị ọrụ ahụ anaghị edozi - mgbe ahụ, usoro nhazi ahụ ga-adị ala na ị ga-eche ogologo oge ...
Usoro nhazi usoro ...
Ihe dị mkpa! Mgbe nhazi ọkwa dị ala, a ga-ehichapụ ozi niile gbasara mgbasa ozi, egwu na mpaghara ga-edekọ, ozi ga-edekọ. Mana ị gaghị enwe ike ịbanye diski n'onwe ya, na n'ọtụtụ mmemme ị gaghị ahụ ya. Mgbe nhazi ọkwa dị ala, nhazi ọkwa dị elu dị mkpa (nke mere na edere faịlụ ahụ). Ị nwere ike ịchọpụta otu esi eme nke a na edemede m (isiokwu ahụ emeela agadi, ma ka dị mkpa):
Site n'ụzọ, ụzọ kachasị mfe iji sụgharịa ọkwa dị elu bụ ịga "kọmputa m" na bọtịnụ nri na diski chọrọ (ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie, anya). Karịsịa, mberede ụgbọala m hụrụ mgbe "ọrụ" mere ...
Mgbe ahụ ị ghaghị ịhọrọ usoro faịlụ ahụ (dịka NTFS, ebe ọ na-akwado faịlụ karịrị 4 GB), dee aha diski (olu egwu: Flash drive, hụ nseta ihuenyo n'okpuru) ma malite nhazi.
Mgbe arụ ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite iji ụgbọala ahụ dịka ọ dị na mbụ, ya mere iji kwuo "site na ọkpụkpụ" ...
Enwere m ya niile, Ezi ugbo